वस्तुतः सबै औद्योगिक उद्यम, जो केन्द्रीय सिस्टम प्रयोग संकुचित हावा पाइपिंग सिस्टम हावा बाहिर आयोजित। तिनीहरूलाई भन्दा हावा बित्दै जाँदा एक 100% चिस्यान छ। यो संक्षेपण परिणामस्वरूप, हावा नेटवर्क मा cooled छ। , हावा प्रणाली को जंग को सबै भन्दा साधारण कारण र परिणाम, अन्तिम उत्पादन को विवाह रूपमा - उहाँले थियो। यो समस्या सोखना ड्रायर दिन्छ समाधान गर्न।
प्रत्येक उद्योग संकुचित हावा चिस्यान को यसको आफ्नै मार्जिन छ। विशिष्ट संकेतक अन्तर्राष्ट्रिय मानक आईएसओ 8573-1 मा वर्णन छन्।
कसरी सोखना ड्रायर गर्छ? चिस्यान एक उच्च क्षमता अवशोषित गर्न wherein एक उच्च porosity, एक पदार्थ - यो adsorbent आधारित छ। नम संकुचित हावा adsorbent को तह मार्फत penetrates गर्दा, यो dehumidified छ। तर, यो सोखना ड्रायर किनभने अवशोषित गर्न चिस्यान सीमित छ यसको क्षमता को, आवधिक पुनर्जनन आवश्यक मनमा सार्ने गर्नुपर्छ। को पुनर्जनन प्रक्रियाको सार - को pores देखि संचित तरल हटाउन। को सोखना उपकरणहरू को पुनर्जनन को सबैभन्दा लोकप्रिय विधिहरू छन्:
चिसो पुनर्जनन। यी उद्देश्यका पूर्व-सुकेको संकुचित हावा लागि। यो अवशोषण पत्र मार्फत पार गरेको छ र यसलाई "बेकारी" थिए छ अतिरिक्त चिस्यान therefrom। यो छ - पुनर्जनन को सस्ता विधि, तर, यो एक महत्वपूर्ण drawback छ: संकुचित हावा केही हानि (15% देखि) उम्कन छैन।
बाह्य तातो पुनर्जनन। को अवशोषण तह अन्तर्गत Blown छ वायुमण्डलीय भन्दा उच्च एक दबाव बाह्य तत्व मा preheated हावा,। त्यसपछि यसलाई आफ्नो ठंडा बनाउन आवश्यक छ। यो उद्देश्य लागि, पहिले नै सुकेको हावा रिकभरी यस प्रकारको, तर आवश्यक छ धेरै कम हानि (2.5%) छ।
निर्वात अन्तर्गत तातो पुनर्जनन। यस मामला मा, तातो हावा वायुमण्डलीय दबाव तल दबाव, अर्थात् एक निर्वात मा आपूर्ति गरिएको छ। अघिल्लो विधि विपरीत, यो मामला को adsorbers ठंडा मा पनि वायुमण्डलीय हावा को माध्यम द्वारा लगे गर्न सकिन्छ। यो प्रणालीमा संकुचित हावा को हानि शून्य छ भन्ने हो।
कसरी पुनर्जनन को प्रकार मा निर्भर गर्दछ, को सोखना ड्रायर चयन गर्न? सबै बस यहाँ। हावा सिस्टम प्रति मिनेट कम्तीमा 35 घन मीटर पेश हुनुपर्छ भने, बचत को मामला मा चिसो पुनर्जनन संग ड्रायर को प्रकार चयन गर्न छ। तर संग तातो पुनर्जनन विकल्प उपयुक्त हुँदा हावा को 35 घन मीटर को अधिक एक मिनेट खुवाउनुभयो छ।
सोखना आवंटित हवाई dryers4कक्षाहरू (को ओसांक आधारमा):
1 -70 डिग्री सेल्सियस (सुदूर उत्तर अवस्था लागि)।
2. -40 डिग्री सेल्सियस (सामान्य कन्टिनेन्टल जाडोयाम लागि)।
3. -20 डिग्री (युरोप मा जाडो लागि, नम्र जलवायु संग क्षेत्रहरु)।
4 तीन डिग्री (पुरानो संस्करण)।
वर्ग जो मा सिस्टम मा condensate को अभाव द्वारा प्रत्याभूति गरिएको छ, तापमान सीमा देखाउँछ। को आगमन हावा तोकिएको सीमा भन्दा चिसो मौसम छ भने, सोखना हावा ड्रायर बस लोड सामना गर्न सक्दैन।
निर्मित माइक्रोवेव ओवन "सैमसंग": समीक्षा
राम्रो डैक समीक्षा, मूल्याङ्कन, वर्णन, सुविधा र समीक्षा
एसएलआर क्यामेरा को सञ्चालन सिद्धान्त
बाहिर आलु गर्न तेज तरिका राख्न कसरी
एक वास्तविक जन्तरको को भर्जिन-महिला कस्तो मणि हुनेछ?
हीरे क्लब Kemer5* होटल (Kemer, टर्की) तस्बिर, समीक्षा, पर्यटन
Gelendzhik मा बाढी, क्रास्नोडार क्षेत्र
विवरण मा एक केटी र केटा को लागि बच्चाको कोठा
चुम्बकीय डिजाइनर: सबै भन्दा लोकप्रिय मोडेल को समीक्षा
कसरी "प्रोत्साहन" मा नेटवर्क मा "terrarium" खेल्न